Nhau - Coronavirus Kudzivirira
Nezve ichangoburwa chaiyo-nguva data kubva kuWorld Health Organisation munaNovember 5, 2020, 47millions kesi eacononary pneumonia akawanikwa pasi rese, aine 1.2millions kufa. Kubva muna Chivabvu 7, maguta ese kuChina akagadziridzwa kuita njodzi shoma uye "zero" munzvimbo dzakakwirira- nepakati, izvo zvinoreva kuti China yakawana kukunda kwakatarwa mukudzivirira kwechirwere chekoronavirus nyowani. Chimiro chechirwere chechirwere chakakomba zvakanyanya. Director-General weWHO Dr. Tan Desai akataura kumusangano wevatori venhau kuti denda iri rinoburitsa pachena kuti hurongwa hwenyika nehwehutano hwakasimba here uye hunoita basa rakakosha musimboti wekuchengetedzwa kwehutano hwepasi rose pamwe nehutano hwepasi rose.
Mushure mekuvapo kwedenda reCOVID-19 kuChina, hurumende yeChinese yakakurumidza kupindura ikatora nzira chaiyo yekudzivirira denda rekudzora kupararira kweutachiona. Matanho akadai se "kuvhara guta", akavhara manejimendi manejimendi, kuzviparadzanisa, uye kudzikamisa zviitiko zvekunze zvinobudirira zvakadzora kupararira kwecoronavirus.
Sunungura panguva yakakodzera nzira dzinotapukira dzine chekuita nehutachiona, zivisa veruzhinji maitiro ekuzvidzivirira, kuvharira nzvimbo dzakakanganiswa zvakanyanya, uye kupatsanura varwere uye vepedyo vanobata. Simbisai nekuisa yakateedzana yemitemo nemirau yekudzora zviitiko zvisiri pamutemo panguva yekudzivirira denda, uye nekuona kuiswa kwezviyero zvekudzivirira nedenda nekuunganidza mauto enharaunda. Kune akakosha madenda nzvimbo, unganidza rutsigiro rwekurapa kuvaka zvipatara zvakasarudzika, uye kumisikidza zvipatara zvevarwere zvevanyoro. Chinhu chakakosha ndechekuti vanhu veChinese vasvika pakubvumirana padenda iri uye vachishandira pamwe nemitemo yenyika dzakasiyana.
Panguva imwecheteyo, vagadziri vakarongeka nekukurumidza kuti vagadzire cheni yakazara yeindasitiri yezvinhu zvekudzivirira zvekupararira. Zvipfeko zvekudzivirira, masiki, mishonga inouraya utachiona uye zvimwe zvinodzivirira hazvisangane chete nezvinodiwa nevanhu vavo, asi zvakare zvinopa huwandu hwakawanda hwezvinhu zvekudzivirira zvekudzivirira kune nyika dzepasirese. Shanda nesimba kuti ukunde matambudziko pamwechete.
Masiki, zvipfeko zvekudzivirira, uye mishonga inouraya utachiona inodiwa nevanhu pasi rese seyakanaka CONVID-19 yekudzivirira zvinhu. Musika wemasikisi, zvipfeko zvekudzivirira, mishonga inouraya utachiona, nezvimwewo yakaoma kune dzakawanda dzenyika.
Seyakashanda disinfection mumiriri, sodium hypochlorite inogadzira system iri kudiwa nevatengi vazhinji pasirese.
Ro Zvakanaka Mvura Kuchenesa Sefa, Ro Mvura Sefa Spare Zvikamu, Nyanzvi Yemvura Yekuchenesa System, Mvura Yegungwa Kumvura Yekunwa Machine, Sodium Hypochlorite System Dhizaini, Ro Desalination Maitiro,